2010-01-08 @ 23:06 in Ankapobeny
Ny hery tsy mahaleo ny fanahy, hoy ny fiteny malagasy iray izay. Mbola ekeko izany ary tiako hanjaka hatrany. Fifandanjan-kery no nisy teto tamin'ny herintaona - Raha misy tokoa liana amin'ny jery todika dia misy lahatsoratra telo mifampitohy mampahatsiahy antsika izay nitranga teto Madagasikara nandritra ny taona 2009 ao amin'ny Global Voices teny Malagasy. Ny fizarana voalohany janoary ka hatramin'ny Aprily dia nosoratan'i Lova Rakotomalala, ny fizarana faharoa manomboka ny volana mey ka hatramin'ny volana novambra sy ny fizarana fahatelo mitantara ny volana desambra kosa dia samy nosoratan'i Mialy Andriamananjara avokoa. Marihina fa lahatsoratra amin'ny teny anglisy ho hitan'ny Besinimaro ireo fa nezahina araka izay tratra kosa ny nandika azy ho amin'ny fitenindrazana. Tsara ihany koa ny mametraka azy ho tahiry - Aza atao mahagaga raha hita avokoa rehefa mety ho karazana hadalana rehetra. Tondroiko amin'izany avokoa isika rehetra, ary iniako tsy misy anavahana. Nankinina tamin'ny hery avokoa manko ny zava-drehetra fa natao ambin-javatra ny fanahy. Tsy mahagaga raha tsy mandeha amin'izay laoniny aloha ny fiainana eto Madagasikara.
Nisy ny fihetsika niniana natao hamandrihana ny mpitondra dia nahavoa tokoa ny fandrika. Nakatona ny fahitalavitra VIVA, nitaky ny hamohana azy ny tompony sady Ben'ny tanànan'ny renivohitra tamin'izany fotoana izany fa avonavom-bava no setriny : "Tsapao aloha ny herinareo vao mitsapa ny ahy!" Nihevitra izy tsinona fa any aminy ny hery ka tsy misy afaka mifampitana aminy. Fihetsika tsy voahevitra niteraka fahatezerana tamin'ny maro, eny fa na dia tamin'ny mpanohana azy aza. Nampiakatra ny hafanam-pon'ireo manohitra azy izany ka nentina nahavoriana olona teny amin'ny kianjan'Ambohijatovo. Nahazo hery ireo ka tafiditra tsy nisy fisakanana ny kianjan'ny 13 mey satria maro ihany ireo mpanaraka azy tsinona. Hery lehibe ho azy ireo izany ary karazana fandresena sahady.
Voatery niverina haingana teto an-tanindrazana ny filoha izay tokony ho nanatrika ny fivorian'ny mpikambana tao amin'ny SADC. Nomanina ny mpanohana azy tamin'ny faritra manodidina ny renivohitra hanao fitsenana makotroka ho azy, hanehoana fa maro mpanaraka ihany koa izy. Maro tokoa ny nanofahofa azy teny an-dalana ary tsy latsa-danja tamin'ny hamaroan'ny olona vao nirotsaka teny amin'ny kianjan'ny 13 mey ny omalin'iny. Raha ny isan'ny olona fotsiny no nolazaina ho hery dia tsy misy ny afa-mitono-tena ho manana ny maro an'isa. Saingy nisy teny an-tsefantsefan'ireo olona nitsena ny filoha ireo no tsy nahazaka sahady ny fanehoan-kevitry ny hafa manana ny safidiny... Nanana fomba fisaina nisetrasetra izy ireo ary nihantsy ady tamin'ny vahoaka milamina mihitsy. Te-hifampitsapa hery tamin'ny mpanohana ny filoha sahady izy ireo ka nanao izay nibahanana ny lalana tetsy amin'ny CENAM Andavamamba. Notorahiny ireo tsy nitovy hevitra taminy ary nopotehiny ny tetezana fiampitàn'ny olona maomaorina. Efa nanana toe-tsaina haneho ny heriny amin'ny alalan'ny sandry sy izay azony natao ho fitaovam-piadiana izy ireo.
Ny ampitson'iny, faratampony tamin'ny fahamaroan'ny olona indrindra ny famorian'olona nataon'ny Ben'ny tanàna. Nikatona noho ny fanapahan-kevitry ny ambonimbony ao aminy ny sekoly katolika rehetra teto an-drenivohitra. Nampiseho ny heriny amin'izay ry zareo, tsy nanana endrika na fihetsika nampatahotra mihitsy ny mpitandro ny filaminana hatreny Anosy, na teny Anosipatrana hatreny Ankorondrano sy Tanjombato. Nitoratora-bato ny miaramila ny mpitolona fa tsy namaly, tsy nahazo baiko tsinona, "nandositra" tao amin'ny Radiom-pirenena ry zareo. Niditra an-tsehatra tao ihany ny Be sandry ary dia namotika sy nandrava ary nangalatra ny fitaovana tao, mbola nisy andia-miaramila tamina kamiao tao fa efa nirehitra ny trano roa tonta (RNM sy TVM) vao niala teo ireo miaramila nahazo iraka hiambina. An'ny mpitolona tanteraka ny hery teo ka dia noravaravainy avokoa ny fananan'ny filoha rehetra. Herim-pandravana izany. Efa nisy moa ny mpitondra amin'izao fotoana izao nahateny fa lehilahy (ny filoha) raha tsy lasa adala amin'izay hanjò azy... Kanjo mbola tsy lasa adala ihany ilay filoha tamin'izany fotoana.
Niova tanteraka ny toe-draharaha ny ampitson'iny, nihevitra ny mpitolona fa tsy ho zakan'ny filoha ny nihatra taminy ka hametra-pialana izy vokatr'izay saingy diso ny kajikajy nataony. Teo ihany koa dia nihamaro ireo olona diso fanantenana tamin'ny nataon'ilay mpitari-tolona ka nanomboka nihemotra tsy hanaraka azy intsony. Nivalaketraka indray ny mpanohitra fa tsy hita izay hanohizana ny tolona. Nomena fotoana handosirana ny mpitarika saingy tsy nanao izany fa niditra tamin'ny dingana manaraka hanohizany ny tolona. Nivadibadika teny ny hoe hakana minisitera nefa tsy mbola voatendry ny ho amin'izany toerana izany. Ny Sabotsy 31 janoary 2009 nanaraka ilay alatsinainy matroka dia nisy andiana komandô nandrava ny sehatra teny an-kianjan'ny 13 mey fa tsy nikitika olona kosa. Manao ramatahora fotsiny ireny, hoy ny mpanao gazety nanentana sy avo vava, satria "tsy hitifitra mihitsy" (hay fantany izany?)... hoy ny voasoratro ho tahiry tamin'izany fotoana izany. Niverina tany amin'ny filoha indray ny hery saingy tsy tafaverina tanteraka izany. Dia nisy ny 7 febroary avy eo lasa nametraka fa voafehin'ny filoha tamin'ny ankapobeny ny hery. Mbola fandrika ihany koa anefa iny fotoana iray iny.
Na inona na inona nataon'ny mpanohitra tsy tena nahombiazana izany, ary dia nanomboka ny fandravana ny hetsika teny amin'ny kianjan'ny 13 mey. Tsy azo nandehanana mihitsy ny toerana. Mafy ny asan'ny mpitandro ny filaminana ka nahahendratrendratra azy ireo izany. Andro Sabotsy, andro farany noheverin'ny filoha sy ny mpanara-dia azy ho faran'ny fanakanana ny hetsika teny amin'ny kianjan'ny 13 mey no nivadika amin'izay ny miaramila tamina toby iray. Nioko tsy hanaraka ny baiko intsony izy ireo, sady efa voafehiny rahateo ny fitehirizam-pitaovam-piadiana. Nivadika tsikelikely indray ny nahazo hery nanomboka hatreo ka nahazoan'ny Ben'ny tanàna ny fahefana hitondra ny firenena. Hery no nahazoana ny fahefana. Na dia niezaka ny nitolona am-pilaminana aza ny mpandala ny ara-dalàna sy ny mpanohana ny filoha Ravalomanana dia toy ny tsy nahombiazana mihitsy, satria sady tsy any aminy ny hery no be mpitsikilo sy mpandrava tolona amin'ny fivoahana ny kianja tsy voaaro ao anatiny. Tsy misy olona tena manana tara-pahefana ihany koa ao anatin'ny mpitolona fa mitady hiankin-doha amin'ny hafa hitari-dalana azy ireo ny hetsika. Amin'ireny fotoana ireny hatrany anefa no voa mafy mandrakariva ny mpanohana ny filoha Ravalomanana.
Nandritra izany fotoana izany dia natao kilalao ny fanahy. Natomboka tamin'ny fotoam-pivavahana tao amin'ny kianja mitafon'i Mahamasina ny tolona ny alahady 11 janoary 2009. Samy nahafantatra ny rehetra nanatrika fa tsy ilay fotoam-pivavahana no tena zava-dehibe fa ny handrefesana kosa ny hamaroan'izay mety hanaraka ny tolona hatao. Niasa mafy ny sampana fampahalalam-baovaon'ny fitondrana frantsay tamin'ny fanaovana tatitra ny hetsika. Natao fitaovana politika hatrany ny fivavahana. Nandritra ny hetsika volomboasary dia noterena hifandamina sahady ny ankolafy mpifanandrina nefa ny iray mitaky ny hialan'ny filoha amin'ny toerany aloha vao hiditra amin'ny fifampidinihana, ny ankilany kosa tsy mieritreritra ny hiala mihitsy. Notondroina ho mpanelanelana avy hatrany ny mpitondra fiangonana efa-dahy tao amin'ny FFKM izay notarihin'ny Arseveka OMAR indrindra tamin'iny taona iny. Hay moa tamin'ny mpanelanelana voatondro sy ny mpifampidinika efa nisy nanana tanjona hafa dia hafa ihany koa. Tonga ny 17 marsa 2009 fa nisy nanainga vozon'akanjo tamina mpitondra fiangonana no sady anisan'ny mpanelanelana ny miaramila. Tsy nampihetsi-bolomaso ny solontenan'ny Katolika izay tompon-trano anefa izany fihetsika tsy voahevitra izany. Nanomboka hatreo no karazany rava ny FFKM, ary nohosihosena ny hasin'ny mpitondra fivavahana. Nangina ny mpitondra fivavahana saingy tsy nahazaka ny fahanginana intsony volana vitsivitsy taty aoriana.
Na dia maro aza ny olona no mitsikera ny fanapahan-kevitry ny mpitondra fivavahana tsy hiditra amin'ny resaka politika dia tsy izany kosa no sainin'izy ireo. Mifototra amin'ny fahamarinana ny hetsika ataony. Izay no lazainy, nefa heveriko fa ny tanjona hafa tiany apetraka dia ny hamerenana indray ny hasin'ny mpitondra fivavahana eo amin'ny sehatry ny firenena. Mahafantatra tsara izy ireo fa tandindonin-dozan'ny ady an-trano, tahaka ny fitiavana hampifandrafiana ny samy mpivarotra amin'izao fotoana izao, ny firenena ka tsy afa-mijery fotsiny ny loza hanjo ny fireneny. Te-hijoro hitandro ny fandriampahalemana sy ny fihavanana izy ireo ka andraikitra lehibe miandry azy ireo ny fanakanana ny fampiasan-kery tsy hahavaha vetivety ny olana fa hampitombo ny ratram-po sy fifamonoana fotsiny. Tsy nampoizin'ny mpitondra ity fijoroana vaovao ity ka notadiaviny ny hisotasotana ny fiangonana ahitana ny tena maro an'isa amin'ireo mpitondra fivavahana ireo. Tsy atao mahagaga raha natao izay handrarana ny vaovao tao amin'ny radio FJKM, ary amin'izao fotoana izao ny fampidirana amponja ny tale sy ny mpanao gazety iray amin'ity radio FJKM ity ihany. Te-hampiditra amin'ny fifandanjan-kery tsy mitovy ny mpitondra firenena amin'izao fotoana izao... saingy tsy toy ny tolon'ny misalasala eo amin'ny fifikirana amin'ny tsy fampiasan-kery tazonin'ny tena mavitrika ao amin'ny kianjan'ny ara-dalàna sy ny te-hiditra amin'ny fampiasan-kery tsy ananana akory fa dia misetrasetra (na migafy ny tolona) fotsiny no ataony.
Izaho manokana dia tsy mankasitraka mihitsy ny idiran'ny sarambamben'ny olona amin'ny herisetra sy ny fampiasana fitaovam-piadiana saingy efa very toky ny amin'izay ho tohin'ny tolona. Mpiroaroa saina loatra manko ny mpitarika ary eo dia eo ihany koa ireo mpandrava avy ao anatin'ny tolona ka tsy mahagaga raha tsy mahita teti-panorona mahomby hanohizana ny tolona izy ireo. Efa nametraka aho fa efa vita kosa angamba izay ny anjaran'ny olo-tsotra fa anjaran'ny hafa mahatsapa ny andraikiny sy ny fananany hery voafehiny tsara manoloana ny fampiasan-kery no manohy azy. Velom-panantenana tampoka aho raha nahare fa mijoro ary milaza ny tsy hihemotra intsony amin'ny tolona sivika ataony ny mpitondra fivavahana. Manana tara-pahefana izy ireo, sarotra ny idiran'ny mpitsikilo (misy ao amin'ny magro) amin'ny fifandaminana anatiny, ary tsy azo tsinontsinoavina ny fifampifehezana eo aminy ka tsy mahagaga raha velona indray ny Herimpanahy vaovao handrava ny fanahin'ny hery mpitondra fandravana. Koa aza gaga raha ho amina toeran-kafa indray no ho toera-mahazatran'ireo tsy nitsahatra nitolona teny amin'ny kianjan'ny ara-dalàna nandritra iny taona nivalona iny. Tsikaritra ho tsy mitsahatra ny mamotika ny fahazotoan'ny olona manko ny maro amin'ny mpitarika eny. Teny tsy misorona ny ahy. Efa manana fironana hanaraka kokoa ireo mpitondra fivavahana ireto ny tena... noho ny fandresen-dahatra ato amiko hoe raha mbola afaka mifampitana amin'ny hery hatrany ny fanahy dia te-hino kokoa ny fahamarinan'ny ohabolana malagasy izay tsy hotononiko intsony aho.
jentilisa, faha-9 janoary(1) amin'ny 01:09